YawNathan Zinyaw: အာရောဂျံ ပရမ္မံလာဘံ
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 12:23 AM
အာရောဂျံ ပရမ္မံလာဘ တဲ့လား ဟုတ်ပ မှန်ပ လို ထောက်ခံလိုက်ပါရစေ..
ခေါင်းတခြမ်းကိုက်တယ်။ အဲဒါ ကွန်ပြူတာ ဗိုင်းရပ်က လူကို ကူးတာလေ ..း)
ဟုတ်သားပဲ လမ်းလျှောက် ထွက်လိုက်ဦးမယ် ဟဲဟဲ..
Dont worry !!! be happy !!!( သံစဉ်လေးကို လေချွန်ပြီး လမ်းလျှောက် )
နှင်းတွေ မကျတော့ဘူးဆိုရင် လမ်းလျှောက်ရတာ
ပိုပြီး ကောင်းမှာပါ အမရေ။
သြော် ညီမစိုးသင့်ဆွေတစ်ယောက် ဒါကြောင့်ပို့စ်အသစ်
ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တခုခုတော့လုပ်နိူင်
အကိုဆို လမ်းလျှောက်လိုက် ပြေးလိုက် ဘောလုံးကန်
လိုက် ကြက်တောင်ရိုက်လိုက်နဲ့ နေ့တိုင်းအားရတယ်ကို
စောစောအိပ်လို့ စောစောထလို့ စောစော လမ်းလျှောက်ကြပါစို့
တင်းတောင်.. တင်းတောင်.. တင်းတောင်..
ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်တာကောင်းပါတယ် ...။
လမ်းလျှောက်တာက အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းပဲလို့ဖတ်ဖူးတယ် ...။
ကိုယ်က စာပို့သမား အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်သရွေ့ ဒီ အဆိုက မှန်နေဦးမှာပါ .. :)
ယောနသံစင်ရော်ဆိုတော့ ချန်းအဘိုးအိုနဲ့ ပြန်တွေ့သေးလားလို့မေးချင်လို့ comment ၀င်ရေးလိုက်တာ ... :)